Calaamadaha kooxaha tartanka | Hal-abuurka Online
Calaamadaha kooxaha tartanka
Ma leedahay koox saaxiibbadaa ah? Waxaa laga yaabaa in macmiilku kuu wakiishay inaad u samayso calaamado kooxaha tartanka eSports ama kuwa la mid ah? Ma aha waalan sida aad u malaynayso, waana hal mashruuc oo kale oo kuu iman kara.
Markaa og sifooyinkee ayaa ka kooban calaamadaha kooxaha tartanka, sida loo sameeyo iyo fikradaha Calaamadahaas waxay u noqon kartaa fikrad aad u wanaagsan. Kadibna waxaan rabnaa inaan kaa caawino inaad haysato tusaalooyin oo aad ogaato waxa ay tahay inaad eegto si aad mid u sameyso.
1 Astaamaha summada kooxaha tartanka ku jira
1.1 Waa maxay isbeddellada ay leeyihiin
2 Goobaha si loo sameeyo calaamado loogu talagalay kooxaha tartanka
3 Tusaalooyinka calaamadaha kooxaha tartanka
3.2 Ciyaarta Rive ee Slavo Kiss
3.3 Ciyaarta Cutlass ee JP Design
3.4 ThirtyBomb oo uu sameeyay JP Design
3.5 Dragon Esports, waxaa qoray Jhon Ivan
Astaamaha summada kooxaha tartanka ku jira
Calaamadaha kooxaha tartanka ku jira waa naqshado sumad ah oo ka duwan kuwa kale, Waxa la isku dayaa in lagu bixiyo xoog, geesinnimo, tamar, iwm. Ujeedadu maahan wax kale oo aan ahayn in lala xiriiriyo kooxda iyo halganka ay ugu jirto guusha sawirkaas la abuuray. Sababtan awgeed, doorashada qaababka, sawirada, midabada, iyo xitaa qoraallada, ayaa wax badan ku leh. Waanu sii falanqaynaynaa.
Guud ahaan, summada kooxda tartanka ku jirta waa inay samaysaa aragti aad u xooggan, labadaba sida kooxda asalkeeda aqoonsiga u gaarka ah, si ay uga soocdo tartanka, laakiin sidoo kale inay isku xidho dhegaystayaasheeda, xubnaha kooxda iyo inay noqoto caddayn ujeeddadu tahay dhammaan. .
Calaamadahaan waxaa lagu magacaabaa calaamadeynta kooxda, sababtoo ah waxa la raadsado iyaga waa in la abuuro xoog ku wareegsan xubnaha kooxda (ka duwan calaamadaha shirkadda, taas oo ay rabaan inay muujiyaan astaanta).
Waa marka la naqshadeynayo marka naqshadeeyaha garaafyada uu soo galo ciyaarta. Tani, sidaan horay u sheegnay, waa in lagu hagaajiyaa dhinacyo gaar ah sida nuxurka kooxda, waxaad rabto inaad gudbiso, midabada, qoraalka, iwm. Waa run in ay jiraan beddelaad ka jaban ama bilaash ah (kuwaas oo aan hoos kaga hadli doono) laakiin kuwani inta badan maaha kuwo asal ah sida kuwa naqshadeeyaha uu abuuri karo.
Waa maxay isbeddellada ay leeyihiin
Inta badan summada eSports-ka ama kooxaha tartamaya waxay u muuqdaan inay leeyihiin dhibco ay wadaagaan. Mid ka mid ah waa avatars ama images, kuwaas oo tixraacaya ciyaaraha, xayawaanka ama calaamadaha caadiga ah, waxaan ka hadleynaa seef, taaj, boqor, gaashaan ...
Xagga "xooggooda", waa run in inta badan ay diiradda saaraan matalaadda awoodda iyo nacaybka, "cabsida" marka la arko calaamadahooda. Laakiin had iyo jeer maaha inay sidan ahaato, waxaa jira waqtiyo ay ka jilicsanaan karto (bartilmaameedka garaadka iyo garashada).
ka naqshadaha ugu caansan waxay had iyo jeer ku sharmaan:
Xayawaanka: yeyda, daayeer, shabeel ama libaax, ama xataa jiirka. Mararka qaarkood bakaylaha, bisadaha, eeyaha, yaxaasyada, qorratada, masaska ayaa sidoo kale lagu daraa ...
Shakhsiyaadka khuraafaadka ah: sida elves, goblins, saaxiriinta, jiidisyada ...
Qaybaha caadiga ah: qalcado, seefo, koofiyado, munaaradaha, buuraha, taajka, boqorrada, gaashaammada ...
Dadka: ninjas, shinigamis, budhcad-badeed, Vikings, dagaalyahanno, Knights, askar ...
Wajiyada: xanaaq, kicin, canaan, daran...
Walxaha dheeriga ah: dabka, qaraxyada, ciyaarta kontaroolayaasha, qoryaha...
Goobaha si loo sameeyo calaamado loogu talagalay kooxaha tartanka
Haddii macmiilkaagu aanu haysan agab uu ku siiyo 100% shaqada asalka ah oo aad wali rabto inaad u soo bandhigto soo jeedin, waxaad dooran kartaa inaad u abuurto calaamado kooxaha tartanka kula jira qaab-qaabeeya. Waxaa jira dhowr goobood oo aad ku samayn karto sida:
Waa a website-ka, ka dib casharrada, aad ku abuuri karto eSports logos bilaash ah. Haddii aad sidoo kale leedahay xirfad leh naqshadeynta, waxaad had iyo jeer siin kartaa wax yar oo shakhsi ah.
Hadda waa mid ka mid ah fursadaha ugu fiican ee aad hesho sababtoo ah waxay leedahay tan oo habyaallo iyo garaafyo ah, oo lagu daray xitaa waxaad samayn kartaa logos animated. Dabcan, kuma talineyno iyaga sababtoo ah haddii calaamadda loo daabaco baayacmushtarka waxay luminaysaa nimcada oo dhan.
Waxa laga yaabaa inay tahay mid ka mid ah boggaga sida aadka ah diiradda u saaraya summada eSports-yada. Tuur in ka badan 200 oo templates waana la beddeli karaa marka waxay ahaan lahayd shaqo ugu yar in la siiyo taabashadaas gaarka ah.
Tusaalooyinka calaamadaha kooxaha tartanka
Sida aan ognahay in laga yaabo inaad u baahato xoogaa dhiirigelin ah si aad u sameysid calaamado loogu talagalay kooxaha tartanka ku jira, halkan waxaa ah qaar ka mid ah xiriiriyeyaasha tusaalooyinka naqshadaha kale ee naqshadeeyayaasha garaafyada ay sameeyeen kuwaas oo ku siin doona fikrad ah sida aad adigu u samayn karto.
Waxaan raacnaa naqshad si fiican u guursanaysa. Oo, haddii aad si dhow u eegto, calaamaddu waxay ka kooban tahay erayada Agility Esports iyo shabeel ku jira booska boodada.
Sida aad ogtahay, shabeelku waa mid aad u jilicsan, maaha sida xayawaanka kale, laakiin kiiskan si fiican ayuu u shaqeeyaa sababtoo ah wuxuu sidoo kale muujinayaa xooggiisa. Isla markaana taas waxaad dadka kale u sheegaysaa in kooxdu ay adag tahay, Waxaad sidoo kale u sheegtaa inay awoodaan inay weeraraan marka aad filayso.
Waad heleysaa aquí.
Ciyaarta Rive ee Slavo Kiss
Xaaladdan oo kale waxaad haysataa calaamad ka sii kulul haddii ay suurtogal tahay. Marka orso weerar ah ayaa u muuqata, ciddiyihiisii ​​la soo baxay oo muuqaal si qumman uga muuqda fangaska. Ma aha orso dhammaystiran, tan iyo markii lagu ciyaaro hadh iyo dirqi ayaa muujinaya ugu yaraan si aad u ogaato inuu yahay xayawaankaas.
Dabadeed, ereyada, haddii aad eegto R waxay leedahay calaamado muujinaya in la jeexjeexay, cidiyahaasna ay cad yihiin.
Midabada bunni, casaanka, caddaanka iyo madowga ah ayaa siinaya xarrago laakiin waqti isku mid ah awood.
Waad aragtaa Halkan.
Ciyaarta Cutlass ee JP Design
Horta miyaynaan ka hadlin budhcad-badeedda, seefaha iyo calaamadaha caadiga ah sida gaashaanka? Hagaag, halkan waa la isku ururiyey. A budhcad-badeed laba seefood leh oo gadaasheeda gadaasheeda ka muuqda iyo waraaqaha kooxda.
ThirtyBomb oo uu sameeyay JP Design
Xaaladdan oo kale, kama hadlayno hal sawir, laakiin saddex, gaar ahaan saddex neef oo sida guumays, yeey iyo mas. Midabada cagaarka ah, caddaanka iyo jaalaha ah, tandem ee jaantusyada, dhinaca kale guumaysta oo leh indhaheeda jaalaha ah ee muuqda, iyo yeeyga iyo masku, waxay sameeyaan saameyn.
Dragon Esports, waxaa qoray Jhon Ivan
Xaaladdan oo kale waxaan arki karnaa sida kooxdu ay tahay Dragon Esports, laakiin calaamaddu waxay dhigtay "Draken". Maxay tani u dhici kartaa? Hagaag, waxay noqon kartaa sababtoo ah waa mascot kooxda, markaa ugu yeeraan Draken.
Naqshadu waxay samaysaa masduulaagii wuxuu xuduudda ku dhow yahay ereyga oo dhan, taas oo aad u muuqata, halka madaxa masduulaagii ka digay in "ha khaldin isaga la."
Ma fiirin kartaa Halkan.
Waxaa jira xulashooyin badan oo badan oo aad eegi karto, laakiin waxaan u maleyneynaa in kuwan aad haysato ku filan si aad u ogaato sida loo sameeyo calaamado loogu talagalay kooxaha tartanka. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad wax su'aalo ah qabtid, mar walba waad na weydiin kartaa waxaana isku dayi doonaa inaan ku caawinno.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Dhiirrigelinta » Calaamadaha kooxaha tartanka